Ummeli wenkonzo yokufezekisa | Inkonzo yokufezekiswa kwe China ukuCutha kunye noMrhwebi
Inkonzo yokufezekiswa kweChina
Ixabiso lenkonzo eyongeziweyo
Ngaba inkonzo yethu yokukhetha kunye nokupakisha ibancede njani abathengi? Umthengi uthe: Ndiyamangaliswa kakhulu kukuba iphakheji yemveliso intle kakhulu, imveliso ihambelana, kwaye umthengi wanelisekile. -— AmaRoma sibonelela ngokukhetha okupheleleyo kunye nokupakisha inkonzo yokufezekisa eyenzelwe ukuhambelana neemfuno zakho zeshishini! I-99.6% yokuchola inqanaba lokuchaneka kudityaniswe ngokupheleleyo kwiwebhusayithi yakho kunye nokuthengisa amaqonga Ukulawulwa okuzenzekelayo kwesitokhwe kuhlaziywa kwenkonzo yemini enye Imiyalelo epakishwe ngokufanelekileyo Ifunyenwe ...
Zithini iinkonzo zokufezekisa? Inkonzo yokufezekisa yindawo yokugcina umntu wesithathu ekulungiselela nokuthumela iiodolo zakho. Ikwenza oku kwiziko lokufezekisa. Iinkonzo zokufezekisa i-ecommerce zilungele amashishini angafuni kujongana nokuhanjiswa ngenqanawe okanye akhuphe amandla akhoyo okugcina izindlu ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba angabinakho ukuhambisa iiodolo ngokwazo. Ukuzaliseka kwe-automation 1.Sunson API ikwenza ukuba udibanise iiwebhusayithi zakho kunye nokudibanisa idatha. 2.Umanyano ...
Ngokumangalisayo ngokulula i-Shopify ukuzaliseka komyalelo kunye ne-Sunsonexpress. Sinceda abathengisi bakwaShopify bazalisekise iiodolo ngokukhawuleza nangeendleko ezifanelekileyo ukuhlangabezana nokulindelweyo ngabathengi babo. Ivenkile yenza ngokudibeneyo ngaphandle kwesoftware yethu ukuzalisekisa ukuzaliseka kunye nolawulo lwempahla, ikuvumela ukuba ugxile ekuthengiseni nasekukhuliseni ishishini lakho- ungakhathazeki ngokuzaliseka kwe-odolo. Umdibaniso olula Qhagamshela ivenkile yakho yakwaShopify kwiSoftware yokufezekisa i-Sunsonexp ngamanyathelo nje ambalwa alula. Qhagamshela ivenkile yakho ...
Zithengise ngokwakho ngeeNkonzo zethu ezongezwe ngeXabiso! Ukuphuculwa kweBrand 1. Ukongeza ukongeza kwintengiso ukukholisa kunye nokugcina abathengi bakho. 2. Ukupakisha iimveliso zakho kwiibhokisi ezenziwe ngokwezifiso, kwisitayela sakho osithandayo. 3. Ukubamba kunye nokudibanisa kukhulisa ukuhambisa kwakho kunye nokwenza lula inkqubo yokuhambisa. 4. Ukuhlawulwa kweLableling yinkqubo enobunzima kodwa kubalulekile ukuze siyithathele indawo, kwaye sibeka iilebhile ngokufanelekileyo ukuqinisekisa ukubonakala kweemveliso zakho. Inkonzo yokuThengiswa kweeNkonzo kule nto ihamba ngokukhawuleza ...
Nikezela ngenkonzo yokugcina efanelekileyo, ekhuselekileyo nesimahla e China Sine 3000 + square metres yokugcina Shenzhen, Nikezela ukusetyenziswa simahla iinyanga ezintathu kubathengi abatsha, kunye nakwasimahla emva kwe3months ngokusekwe kwi-60Pcs yeeodolo zokuhambisa ngenyanga, 3000m² yokugcina unokuhlangabezana nesidingo sakho sokukhula kwempahla, ngokukhawuleza uqhubekise iodolo yakho kwaye ulungiselele ukuhanjiswa. Thina Indawo yokugcina izinto yase China ukugcina isitokhwe sakho sikhuselekile, sigcwalisiwe ngokhuseleko lwe-24/7 kunye ne-inshurensi. Inyathelo1: Indawo yokuGcina ...
Izibonelelo zokwehla kweDropshipping yimodeli yeshishini entle yokufuna oosomashishini ukuba baqale nayo kuba iyafikeleleka. Ngokulahla, unokuvavanya ngokukhawuleza izimvo ezahlukeneyo zeshishini ngecala elilinganiselweyo, elikuvumela ukuba ufunde lukhulu malunga nendlela yokukhetha kunye nokuthengisa iimveliso ezifunekayo. Nazi ezinye izizathu ezimbalwa zokuba ulahle imodeli eyaziwayo. 1. Imali encinci iyafuneka Mhlawumbi esona sibonelelo sikhulu sokwehla kukuba kunokwenzeka ukumilisela ivenkile ye-ecommerce ...